Fiaraha-mason'ny voa alemanina: fomban-drazana Alemanina manana kalitao ho an'ireo mpamboly ovy Rosiana - Gazety "Ovy"
Solana dia orinasam-pianakaviana iray izay niompy sy namboly ovy nanomboka tamin'ny 1905, mitahiry tsara ireo fomba amam-panao amin'ny asa aman-draharaha sy mizara traikefa ary zava-bita vaovao hatramin'ny taranaka fara mandimby.
Ny tanjona lehibe amin'ny fiompiana Solana dia ny hampiroborobo karazana varotra manintona sy mahomby izay mahatohitra aretina maro ateraky ny viriosy, bakteria ary holatra, ireo karazana izay manome vokatra marin-toerana tsy misy fampiharana ny vokatra fiarovana ny zezika sy ny zezika, izay manampy amin'ny ny fitehirizana ny tontolo iainana, fa ny karazany kosa dia miavaka amin'ny tsiro tsara, fampisehoana tubers sy toetra mampiavaka ny tsena ovy maoderina.
Ny fifantenana dia tanterahina any amin'ireo toeram-piompiana misy antsika any Alemana sy Holland, izay misy amin'ny toe-piainana voajanahary sy toetr'andro tokana mba hialana amin'ny otrikaretina virosy sy aretin'ny holatra.
Ny karazana SOLANA dia misy karazana fampiasana isan-karazany, vanim-potoana masaka, natao ho an'ny faritra klimatika samihafa: karazana latabatra iraisana, karazana fanasana, fanadiovana, fonosana, famokarana chips, french fries, starch, aloha sy antonony aloha. Amin'izao fotoana izao dia misy karazany 25 ao amin'ny State Register of Variities of the Russian Federation.
Tamin'ny 2021, zava-baovao roa hafa no voasoratra anarana: karazana EDISON sy KING RUSSET.
Solana dia manome ovy voa ho an'ny firenena maherin'ny 40 manerantany. Tany Russia, ny tantaran'i Solana dia nanomboka tamin'ny 1991 niaraka tamin'ny fandefasana ovy voalohany ary ny famokarana ovy niaraka tamin'ny mpiara-miasa Rosiana. Tamin'ny taona 1994, ny orinasa dia nanolotra ny fangatahana voalohany tany amin'ny State Sort Commission ho an'ny fisoratana anarana ireo karazana vaovao ROSARA sy ZEKURA. Ary efa tamin'ny 1995, ny orinasa iraisan'ny Rosiana-Alemana voalohany amin'ny famokarana ovy zana, ZAO Samara-Solana, dia noforonina, noho izany, ny orinasa Solana dia lasa iray amin'ireo voalohany nanoritra ny famokarana ovy voa tao Russia ary efa namokatra ovy voa eto amintsika mandritra ny 25 taona mahery. ovy. Ny famokarana ovy eto an-toerana dia tanterahina mifanaraka amin'ny fenitra kalitaon'ny Alemanina sy ny takian'ny GOST RF.
Mahatsapa ny fepetra takin'ny tsena rosiana ny orinasa Solana ary mitarika asa fiompiana amin'ny fiheverana ny safidin'ny mpanjifa Rosiana. Ka ny mpamboly ovy Rosiana sy ny mpanjifa dia mankafy manokana ny karazany KOROLEVA ANNA, RED LADY, LABELLA, BELMONDA noho ny fisehoana ambony, ny vokatra avo sy ny tsiro.
Hatramin'ny taona 2011 tany Russia, ny varotra karazana varotra Solana voasoratra rehetra dia notanterahin'ny Alemanina Seed Alliance, izay manome torohevitra sy fanohanana ara-teknolojia, miezaka mba hiantohana ny tombom-barotra amin'ny famokarana ny mpanjifanay, dia mandamina fitsapana fampisehoana mba hahafahan'ny mpanjifa tsirairay mizaha toetra sy misafidy ireo karazana manintona ara-toekarena indrindra ho an'ny tany manokana sy ny toetr'andro, ary afaka mifankazatra amin'ny karazan-karazan-ovy iray amin'ny safidin'i Solana.
Ireo manampahaizana manokana amin'ny Alemanina Seed Alliance dia miara-miasa am-pahavitrihana amin'ny mpanjifa, manome torohevitra momba ny safidin'ny karazany, manome fanohanana ara-teknolojia, mampifanaraka ny zava-misy vaovao, miezaka ny manolotra tolotra ho an'ireo mpamboly ovy izay mahafeno ny fepetra takin'ny tsena maoderina indrindra. Serivisy mahay sy fomba fiasa manokana no miantoka ny fahombiazan'ny mpanjifan'ny Alemanina Seed Alliance.
Tags: Alikaza Alemaninaovy
Pesticides manakana ny fiforonan'ny oestraida Phytophthora infestans
Saika ny lohany manontolo: ny fomba naharesy ny ovy tany Eoropa